Azụmahịa na laptọọpụ: jiri azụmahịa ndị a zụta kọmputa gị ọnụ ala
Mgbe ị na-azụta laptọọpụ, ọ dị mkpa iji tụnyere ọnụ ahịa ma lelee ụlọ ahịa dị iche iche ma ọ bụ weebụsaịtị. Nke a nwere ike ịchekwa nnukwu ego na ịzụrụ ngwaọrụ dị otú ahụ.
Ị chọrọ ịma ihe azụmahịa laptọọpụ e nwere taa? Nke a bụ ndị kacha mma:
Hụkwu azụmahịa flash na laptọọpụ
E nwekwara ụbọchị ụfọdụ mgbe ọ ga-ekwe omume ịzụta laptọọpụ na ọnụahịa kacha mma.
N'ihi nke a, a na-atụle ụfọdụ n'ime ụbọchị ndị a n'okpuru. Oge mgbe ọ nwere ike ịmasị ịzụrụ laptọọpụ. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịchekwa ego na ịzụrụ ihe a maka ndị na-azụ ahịa.
Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ dị ọnụ ala karịa?
Eziokwu bụ na ọ ga-ekwe omume ịzụta laptọọpụ dị ọnụ ala. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-adabere na ihe dị iche iche, nke ndị ọrụ kwesịrị iburu n'uche mgbe niile na usoro ịzụrụ ihe. Ma ọ bụrụ na a maara ihe ndị a, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịchekwa na ịzụrụ laptọọpụ.
Nke mbụ, ị ga-atụnyere n'etiti ụlọ ahịa. Ọnụ ego dị iche iche nwere ike ọ gaghị adị oke oke, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-enwekarị ọdịiche. Ma ọ dị mkpa na ọ bụrụ na ị họrọlarị laptọọpụ ị nwere mmasị ịzụta, tụnyere ọnụahịa na ụlọ ahịa dị iche iche, na mgbakwunye na ọnọdụ ịzụrụ.
N'aka nke ọzọ, ọ dị mma ịmara maka ịdị adị nke onyinye na nkwalite. Enwere ụlọ ahịa na-enwe mbelata ego ugboro ugboro, nke nwere ike ibute mbelata ego na laptọọpụ ahụ a kpọtụrụ aha n'elu. Ọ na-enye gị ohere ịchekwa ntakịrị na ịzụrụ ihe a mgbe niile. Ọ dabere na ụlọ ahịa ahụ, nkwalite nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ obere oge. Ụfọdụ na-enye ihe ọhụrụ kwa izu.
Na mgbakwunye, dabere na ika ahụ, enwere ike ịnwe nkwalite ma ọ bụ obere. Ụdị dị ka Apple anaghị enwekarị ego n'ọtụtụ oge. Mana ndị na-achọ laptọọpụ nwere Windows, mgbe ahụ, ha ga-enwe ọtụtụ ohere. Enwere ike ịdị iche n'etiti ụdị n'ihe gbasara nkwalite.
Ụbọchị nke ịzụrụ ihe bụ ihe a ga-eburu n'uche. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ na oge ahịa, ma ọ bụ ụbọchị dị ka Black Friday (nke a na-atụle n'okpuru ebe a) dị nso. Ụdị ụbọchị ndị a bụ ihe ị ga-eburu n'uche ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụrụ laptọọpụ. N'ihi na ha nwere ike ikwe ka onye ọrụ chekwaa ego.
Na nkenke, ọ ga-ekwe omume ịzụta laptọọpụ dị ọnụ ala. Ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche ihe ụfọdụ dị ugbu a, iji mee ka ịzụrụ ihe ahụ n'ụzọ kasị nwee ọgụgụ isi ma si otú a nwee ike nweta ego na ya.
Kedu mgbe ịzụrụ laptọọpụ dị ọnụ ala?
Dịka e kwuru n'elu, enwere ụfọdụ ụbọchị mgbe ọ na-ekwe omume ịzụta laptọọpụ dị ọnụ ala. Ndị a bụ ụfọdụ ụbọchị, nke na-enye gị ohere ịnweta ego na ịzụrụ ọtụtụ ngwaahịa, gụnyere ngwaọrụ ndị a. Ya mere, ọ dị mma ka ị na-aṅa ha ntị mgbe nile.
Day enweghị VAT
Ọtụtụ ụlọ ahịa dị na Spain na-ahazi ụbọchị a na-akpọ VAT n'efu n'ime afọ. N'ọnọdụ ụfọdụ ọ pụrụ ọbụna ịbụ izu ụka dum. Nke a bụ nkwalite nke ngwaahịa ndị ahụ enweghị VAT, nke na-anọchite anya nchekwa nke 21% maka ndị ọrụ mgbe ịzụrụ laptọọpụ kwuru. Ya mere, ọ bụ nnukwu ohere iji tụlee.
Ụlọ ahịa dị ka MediaMarkt, Eroski, Worten ma ọ bụ El Corte Inglés na-ahazi ụdị ụbọchị ndị a. Yabụ na nke a bụ ezigbo ụbọchị ịzụta laptọọpụ. A naghị enwekarị ụbọchị a kapịrị ọnụ, mana a na-ekwupụta ha mgbe niile tupu oge eruo.
Maka ndị ahụ nwere akaụntụ Prime na Amazon (nke a na-akpọbu akaụntụ Premium), a na-ahazi ihe a na-akpọ Prime Day kwa afọ. Nke a bụ ụbọchị ị nwere ike nweta ego n'ụdị ngwaahịa niile, gụnyere laptọọpụ. Ọ bụ nkwalite emere maka ndị ọrụ nwere akaụntụ Prime na ụlọ ahịa ahụ.
A na-eme ya n'ụwa niile, na-emekarị n'ọnwa Julaị. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ọnọdụ, kwa ụbọchị ndị gara aga enwere ụfọdụ onyinye dị. Yabụ na ọ bụ ụbọchị ọzọ dị mma iburu n'uche, ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Prime na Amazon. Ị nwere ike nweta ezigbo ego.
Black Friday bụ omenala esitere na United States ebupụ. A na-eme ya n'ụbọchị na-esote Ekele (nke na-abụkarị Tọzdee nke anọ na Nọvemba). Ọ bụ akara mmalite nke oge ịzụ ahịa ekeresimesi. Ya mere, a na-eme ememe na Fraịde nke anọ nke Nọvemba ma na-enye gị ohere ịnweta nnukwu ego n'ụdị ngwaahịa niile. Yabụ na ọ ga-ekwe omume ịnweta laptọọpụ na nnukwu mbelata.
Ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa elektrọnik niile, ma nke anụ ahụ ma n'ịntanetị, sonyere Black Friday. Ya mere ọ dị mfe ịnweta ezigbo azụmahịa. Tụkwasị na nke ahụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, n'izu dum, a na-enwekarị onyinye mmalite, nke na-emekwa ka o kwe omume ịzụta laptọọpụ na ọnụ ahịa dị mma. Ụlọ ahịa ụfọdụ na-agbasawanye nkwalite ha n'ime izu ụka dum.
Ụbọchị ole na ole ka Black Friday gachara, enwere Cyber ​​​​Monday. Na mbụ, ọ bụ ụbọchị mwepu ahaziri maka ndị na-achọghị ịga ụlọ ahịa na Black Friday na America, ebe a na-ahazi nnukwu ahịrị na ọbụna ọgụ maka ngwaahịa. Ọ bụ ezie na ugbu a ọ bụ ụbọchị nke ego n'ụwa nile. N'okwu a, ha na-abụkarị naanị nkwalite na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Cyber ​​​​Monday bụ nnukwu ohere ọzọ iji nweta ego na laptọọpụ. Na mgbakwunye na ịbụ ezigbo ohere maka ndị ọrụ ahụ na-enweghị ike iji ohere nkwalite Black Friday. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ahịa eletrọnịkị na Spain nwere onyinye maka ụbọchị ndị a.
Nọvemba 11 bụ nnukwu ezumike na China. Ọ bụ ụbọchị alụbeghị di, nke a na-eme na mba ahụ yana nnukwu mbelata ego n'ụdị niile (dị ka Black Friday). Nke nta nke nta, ihe a ma ama na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ a na-agafe ókèala, a na-amalitekwa ịhụ nkwalite na Europe. Ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị China na-enwekarị nkwalite dị.
Ọ bụ ohere ọzọ dị mma ịzụta laptọọpụ nwere ezigbo ego. Ọ bụ ezie na na nke a, ọ na-abụkarị ụlọ ahịa ndị China (Aliexpress, GearBest, Geekbuying ...) nwere ego ndị a. Mana, enwere ike ịnwe mbelata na-atọ ụtọ na laptọọpụ.
Zụta laptọọpụ dị ọnụ ala na azụmahịa Black Friday ndị a. Ị ga-atụ uche ha? Tinye ma chekwaa ego na laptọọpụ kacha mma
Jiri ohere Cyber ​​​​Monday zụta laptọọpụ na ọnụahịa kacha mma site na iji ndepụta onyinye na mbelata na kọmpụta anyị. Naanị taa!
Na-achọ azụmahịa na laptọọpụ egwuregwu na Black Friday? Lelee mbelata ego ndị a na MSI, Lenovo, Razer, HP, Asus na ndị ọzọ
Na-achọ laptọọpụ na ọnụahịa kacha mma na Amazon Prime Day? Jiri ohere nke ego ndị a wee nweta kọmputa gị n'ọnụ ahịa enweghị ike ịgbagha
Ị chọrọ ịzụta laptọọpụ na Christmas? Banye wee chọpụta ụdị kachasị mma ị ga-enye ma ọ bụ imeghari kọmputa ochie gị.